Enjoy greater convenience with Brother’s DCP-1610W Multi-Function Centres. The built-in wireless interface enables multiple users to share the printer for better use of resources. Plus, the Brother iPrint&amp;Scan app lets you easily printavariety of file types from, or scan documents directly to your iOS or Android devices.
Carton Sealing Machine သည် အမျိုးမျိုးသော စက္ကူထူပုံး၏ အရွယ်အစား၊ အလေးချိန် ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် တံဆိပ်ခတ်ရာတွင် အလွန်အသုံးဝင်သော စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စက်၏အတွင်းပိုင်းကို အရည်အသွေး အဆင့်တန်းမြင့်သော ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုထားပါသည်။ စက်၏အပြင်ပိုင်း တည်ဆောက်မူမှာ ရိုးရှင်းတဲ့ တည်ဆောက်မူဖြစ်ပါသည်။ စက်၏လိုအပ်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းကို မိမိစိတ်တိုင်းကျ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများကို မြင့်မားစွာ ထုတ်ပိုးပေးနိုင်ခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ တံဆိပ်နှိပ်ခြင်းကို ပေါ်မှအောက်သို့ တစ်ပြိုင်နက်တည်းပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Enjoy greater convenience with Brother’s MFC-1910W Multi-Function Centres. The built-in wireless interface enables multiple users to share the printer for better use of resources. Plus, the Brother iPrint&amp;Scan app lets you easily printavariety of file types from, or scan documents directly to your iOS or Android devices.
Designed to give high print volume users bigger savings, Brother&#039;s inkjet Multi-Function Centre series features Refill Tank System that offers highly affordable ink bottles with ultra-high 6000 page-yield#. Besides enjoying low running cost, users also benefit fromasmarter design that makes ink refilling effortless!
High engineering standard and simple design Easy operation, simple maintenance Hinged stainless top plate Mechanical outside tension control Rigid castors with brake Energy efficient, motor only runs as needed Reliable P.C. Board electric control Affordable for every budget, total value more than competing brands Proven quality with over 120,000 sets sold
<p>- Online Shopping နှင့် စတိုးဆိုင် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အသုံးများတဲ့ ဖောက်ကွင်းအိတ်များကို လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက် မှာယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။</p><p>- အိတ်ပေါ်တွင် ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ခြင်းများကိုလဲ&nbsp; ခေတ်မီသေသပ်စွာ အမြန်ရိုက်နှိပ်ပေးပါသည်။</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Size</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Design</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Printing Color အမျိုးစုံဖြင့် မှာယူနိုင်ပါသည်။</p>
Plastic Bag လက်ဆွဲအိတ်
<p>- ပစ္စည်းမရွေး နေရာမရွေးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ အထွေထွေသုံး လက်ဆွဲအိတ်</p><p>- Online Shopping နှင့် စတိုးဆိုင် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အသုံးများတဲ့ လက်ဆွဲအိတ်များကို လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက် မှာယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။</p><p>- အိတ်ပေါ်တွင် ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ခြင်းများကိုလဲ&nbsp; ခေတ်မီသေသပ်စွာ အမြန်ရိုက်နှိပ်ပေးပါသည်။</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Size</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Design</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Printing Color အမျိုးစုံဖြင့် မှာယူနိုင်ပါသည်။</p>
Plastic Bag ဆန်အိတ်
<p>- IT ခေတ်မှာ ပြောင်းလဲဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။</p><p>- ဆန် ကိုယ်စလှယ်များနှင့် ဆန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် မိမိတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို သေသပ်လှပသော ထုပ်ပိုးမှုအိတ်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်နိုင်အောင် Shwe Nan Daw Plastic Printing လုပ်ငန်းမှ တာဝန်ယူပရစေ။</p><p>- အိတ်ပေါ်တွင် ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ခြင်းများကိုလဲ&nbsp; ခေတ်မီလှပသေသပ်စွာ အမြန်ရိုက်နှိပ်ပေးပါသည်။</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Size</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Design</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Printing Color အမျိုးစုံဖြင့် မှာယူနိုင်ပါသည်။</p>
Plastic Bag ပဲကြာဇံအိတ်
<p>- ပဲကြာဇံ လုပ်ငန်းအရှင်တွေ အတွက် အထူးထူးသတင်းကောင်း။</p><p>- ပဲကြာဇံ ကိုယ်စလှယ်များနှင့် ပဲကြာဇံလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် မိမိတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို သေသပ်လှပသော ထုပ်ပိုးမှုအိတ်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်နိုင်အောင် Shwe Nan Daw Plastic Printing လုပ်ငန်းမှ တာဝန်ယူပရစေ။</p><p>- အိတ်ပေါ်တွင် ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ခြင်းများကိုလဲ&nbsp; ခေတ်မီသေသပ်လှပစွာ အမြန်ရိုက်နှိပ်ပေးပါသည်။</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Size</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Design</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Printing Color အမျိုးစုံဖြင့် မှာယူနိုင်ပါသည်။</p>
Aung Say Paing ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Vinyl Machine တစ်ခုဝယ်ယူတော့ မယ် ဆိုလျှင် ရွေးချယ်စရာ BRAND များစွာ ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အမှန်ကန်ဆုံး ရွေးချယ် မှု့ တစ်ခုကတော့တန်ဖိုးနည်းနည်း ဖြင့် Highest Printing Quality တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင် သည့် နည်းပညာ အရည်သွေးတွေပါဝင်သော အမျိုးစားကိုပဲ ရွေးချယ် သင့်ပါသည်။ BRAND အမျိုးအစားပေါင်း များစွာ ရှိသည့် အနက် RJ5Series Eco Printer တွင် ကောင်းမွန်သော အရည်သွေးများစွာပါဝင်ပါသည်။ Aung Say Paing Adverstising မှ RJ5Series Eco Printer အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ Niprint RJ5- 180E Eco Solvent Printer များအား တင်သွင်း ရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းစက်သည် လက်ရှိတွင် ပြည်တွင်း မှာလည်း အလွန် အသုံးများတဲ့ စက်တစ်ခု ပဲဖြစ်ပါသည်။ Customer လူကြီးမင်းများ၏ ရွေးချယ် မှု့မှန်ကန်စေရန်အတွက် Aung Say Paing Advertising မှ Product များမှ Support လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့်Micro Pizeoelectric inkjet printer စက်ကို ဝယ်ယူ အသုံးပြုလိုပါက Aung Say Paing ကုမ္ပဏီ ကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Plastic Bag ဂျုံအိတ်
<p>- ဂျုံလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် မိမိတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို သေသပ်လှပသော ထုပ်ပိုးမှုအိတ်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်နိုင်အောင် Shwe Nan Daw Plastic Printing လုပ်ငန်းမှ တာဝန်ယူပရစေ။</p><p>- အိတ်ပေါ်တွင် ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ခြင်းများကိုလဲ&nbsp; ခေတ်မီသေသပ်လှပစွာ အမြန်ရိုက်နှိပ်ပေးပါသည်။</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Size</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Design</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Printing Color အမျိုးစုံဖြင့် မှာယူနိုင်ပါသည်။</p>
Plastic Bag အိုင်အိုဒင်း ဆားအိတ်
<p>- ဆား လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် မိမိတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို သေသပ်လှပသော ထုပ်ပိုးမှုအိတ်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်နိုင်အောင် Shwe Nan Daw Plastic Printing လုပ်ငန်းမှ တာဝန်ယူပရစေ။</p><p>- အိတ်ပေါ်တွင် ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ခြင်းများကိုလဲ&nbsp; ခေတ်မီသေသပ်လှပစွာ အမြန်ရိုက်နှိပ်ပေးပါသည်။</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Size</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Design</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Printing Color အမျိုးစုံဖြင့် မှာယူနိုင်ပါသည်။</p>
Plastic Bag ကြက်အူချောင်းအိတ်
<p>- ကြက်အူချောင်း လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် မိမိတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို သေသပ်လှပသော ထုပ်ပိုးမှုအိတ်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်နိုင်အောင် Shwe Nan Daw Plastic Printing လုပ်ငန်းမှ တာဝန်ယူပရစေ။</p><p>- အိတ်ပေါ်တွင် ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ခြင်းများကိုလဲ&nbsp; ခေတ်မီသေသပ်လှပစွာ အမြန်ရိုက်နှိပ်ပေးပါသည်။</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Size</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Design</p><p>- ကြိုက်နှစ်သတ်ရာ Printing Color အမျိုးစုံဖြင့် မှာယူနိုင်ပါသည်။</p>
<p>အရည်သွေးကောင်းမှ လက်ဆောင်ပေးခြင်တယ်ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက်။</p><p>Premium အတွက် ဖြစ်စေ ပေးရတဲ့သူမှာလည်းပစ္စည်း ကောင်းကောင်းလေးကိုမှပေးခြင်တယ်ဆိုရင်တော့</p><p>Royal Tiger-Lady မှာ Gift set လေးတွေကို 10pcs ကနေ stock ရှိမှာယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး customize design ကိုတော့ Qty- 100pcs ကနေစပြီး ဆောင်ရွက် ပေးနေပါပြီဗျ။</p><p>ပါဝင်ပစ္စည်းများ</p><p>Note Book</p><p>USB</p><p>pen</p><p>Water Bottle</p>